para URichard Matthew Stallman (I-RMS), ukulwa nesoftware ephathelene, kuyisisekelo sempilo yakho. Kusukela maphakathi nawo-1990s, usebenzise isikhathi sakhe esiningi ukukhuthaza isoftware yamahhala ngenkathi elahla ukuphucwa kwenkululeko ebekiwe, ngokusho kwakhe nenhlangano yakhe, yilokho okubizwa nge-software ephathelene nokuphathwa.
Impendulo yethu yokuqala enkingeni yekhodi ye-JS engekho mahhala bekuwukuthuthukisa i-LibreJS, evumela ukuthi iziphequluli ezisuselwa kuFirefox zithole futhi zivimbele leyo khodi. Lokho kuyasivikela ekusebenziseni izinhlelo ze-JS ezingakhululekile kusayithi, kepha empeleni ayenzi indawo isebenze. Ukubhala isandiso sayo, njengoba siphakamisa lapha, kuzokufeza lokho. Kungagwema nengozi etholakala ekusebenzeni kwesoftware ngqo kusuka kuwebhusayithi yomunye umuntu.
Lesi futhi ngesinye sezizathu zokuthi kungani iFree Software Foundation incoma ukungasebenzisi iGoogle.
Lezi zandiso kufanele zithembeke, akumele "zikhohlise" .... Akunakwenzeka ukusebenzisa ukuphepha kwangempela ngokusebenzisa ikhodi ye-JS ethunyelwa umsebenzisi, kodwa noma yini isayithi eliyenzayo ukuzama ukusebenzisa into efana nokuphepha, isandiso kumele kwenziwe ngokwethembeka. Ikakhulu, uma isayithi licela umsebenzisi ukuthi aphendule imibuzo ukufakazela ukuthi akalona irobhothi uqobo, isandiso kufanele sibonise imibuzo efanayo, sithole izimpendulo, futhi sizithumele, simvumele ukuthi akhombise ukuthi ungumuntu.
Inhloso yokuqala ukubhala izandiso zokubamba ukufinyelela okungaziwa kulawa masayithi. Imiyalo inikezwa ngisho nokuthi konke kufanele kwenziwe kanjani. Kodwa-ke, ingabe lesi sinyathelo asihambeli kakhulu?